ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ပညာရှင်ကို ဒူတာတေ ဆဲဆို - Yangon Media Group
မနီလာ၊ ဇွန် ၃
ဖိလစ်ပိုင်တရားစီရင်ရေး စနစ်တည့်မတ်မှု ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည်ဟုဝေဖန်ခဲ့သော ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးပညာရှင် ဒီယေဂို ဂါစီယာဆာယန်ကို သမ္မတဒူတာ တေက ”ငရဲကိုသွား”ဟု ဆဲဆိုပြော ကြားလိုက်ကြောင်း ဇွန် ၃ ရက် ရိုက်တာသတင်းက ဆိုသည်။ ဆာယန်အနေဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်ပြည်တွင်း ရေးကို ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ရန်လည်း ဒူတာတေက သတိပေးသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ဗဟိုတရားရုံးချုပ်သည် တရားသူကြီးချုပ် ဆီရီနိုကို ယခင်လကမဲခွဲကာ ရာထူးမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဆီရီနိုသည် အစိုးရ၏အဆိုပြုချက်များကို ပိတ်ပင်တားဆီးနေသဖြင့် တိုင်းပြည်၏ရန်သူ ဖြစ်သည်ဟု ဒူတာတေက ဝေဖန် ပြောကြားအပြီးတွင် ရာထူးမှဖယ်ရှားခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ တရားစီရင် ရေးဆိုင်ရာ အထူးအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူဆာယန်က အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်သည် ဗဟိုတရားရုံးချုပ် တရားသူကြီးများနှင့် တရားရေး အဖွဲ့ဝင်များကို အစိုးရက ခြိမ်း ခြောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၏ တရားစီရင်ရေးစနစ် တည့်မတ်မှု ခြိမ်းခြောက်ခံနေရပြီ ဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက ဝေ ဖန်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါဝေဖန်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဒူတာတေက ”ကျုပ်တို့ နိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စတွေကို မစွက်ဖက်နဲ့လို့ သူ့ကိုပြောလိုက်ပါ။ သူငရဲကိုသွားနိုင်တယ်”ဟု တောင်ကိုရီးယားသို့ တရားဝင်ခရီးစဉ် အဖြစ်မသွားမီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။ ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်းပြောဆို လေ့ရှိသော ဒူတာတေသည် နိုင်ငံ တကာဖိအားများကိုမမှုသူ၊ ဝေဖန်မှုများကို ဂရုမစိုက်သူဟုထင်ရှားသည်။ စကားအပြောအဆိုမှာလည်း အနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းသူဖြစ် သည်။ ဆီရီနိုသည် မာရှယ်လော သက်တမ်းတိုးရေးအပါအဝင် ဒူတာတေ၏အဆိုပြုချက်အချို့ကို ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ရာထူးမှဖယ်ရှား ခံရသည့် ပထမဆုံးတရားသူကြီး ချုပ်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ရခိုင်ဒေသ၏ လိုအပ်ချက်များကို အကူအညီပေးလို၍ သွားရောက် လေ့လာခွင့်ပေးရန် UN နှင့် နိုင်ငံတကာ အ??
ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တိုက်ရိုက်တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ရန် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးမှ ထွက်ရှိသည့်ေ
အသုံးပြုပြီးသား ပစ္စည်းများ ပြန်လည်သန့်စင်ပြီး အသုံးပြုမှုကို မြှင့်တင်ရန် မင်းသား ဂျေဆန်မ??